नायिका वर्षा राउतकाे प्रश्न – कसले सुन्ने हाम्रो चित्कार, कसले मेटाउने हाम्रो त्रास ? - Manaslu Post
नायिका वर्षा राउतकाे प्रश्न – कसले सुन्ने हाम्रो चित्कार, कसले मेटाउने हाम्रो त्रास ?
मनास्लु पाेष्ट २४ आश्विन २०७७, शनिबार १९:१९ 499 पटक हेरिएको
नायिका वर्षा राउतले नारीलाई सम्मान कहाँ छ भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् । दैनिक बलात्कारको घटना बढेपछि उनले नारीलाई सम्मान कागजमा मात्र सिमित भएको उल्लेख गरेकी हुन् ।
वर्षा लेख्छिन्–‘म एक नारी हुँ । एक नेपाली नारी । धेरै अघिदेखिको राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त नेपालको संविधानले हामी नेपाली नारीहरुलाई सम्मानित, सुरक्षित र समान अवसरका साथ बाच्न पाउने व्यवस्थाको लाभ उठाइरहेको नारी । यस्तो संवैधानिक व्यवस्था ल्याउन भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यवाद । तर, कती दिन धन्यवाद भनिरहने । नारी अधिकारका लागि कानुन छ तर कागजमा मात्र सिमित । कानुन मन्त्री र न्यायमुर्ती पनि नारीहरु नै हुनुहुन्छ तर मौन । नेपाली कानुनले आँखा मात्र होइन कान र मुखमा पनि पट्टी बाँधे झै भान भैरहेको छ ।’
वर्षाले भर्खरै जन्मेको शिशुदेखि ८० बर्षकी वृद्धासम्म बलात्कृत भएको घटनालाई स्मरण गर्दै खै कहाँ छ नारीलाई सुरक्षा भनेर प्रश्न गरेकी छिन् । उनले, नारीका लागि कानुन समेत नरहेको बताएकी छिन् । उनले, बलात्कारीहरु गर्वसाथ पुरुषार्थ प्रदर्शन गरिरहँदा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने सांसददेखि मन्त्री नै संख्या गनेर बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन् ।
उनले प्रश्न गरेकी छिन्–‘कसले सुन्ने हाम्रो चित्कार, कसले मेटाउने हाम्रो त्रास, कसले दिने हामीलाई सुरक्षा अनी न्याय ?
प्रियंका चोपडाले तोडिन् लकडाउनको